Kedu ụzọ ndị ị ga-esi edozi saịtị gị maka backlinks?
Ọ bụrụ na ị na-eche ma ụlọ njikọ ọ ka dị ndụ ma ọ bụ na ọ bụghị, isiokwu a ga-enye gị azịza doro anya maka ajụjụ a.
Anyị nwere ike ikwu ya na obi ike na njikọ njikọ nwere nnukwu mmetụta na ọkwa na ikike ikike. A na-eji njikọ engines na-ejikọta aka na njikwa iji chọpụta otu ebe nrụọrụ weebụ dị mkpa na isiokwu ndị ọ na-akwado.
N'ikwu eziokwu, ọ bụ naanị ụlọ na-ejikọtaghị ekwekọ ka a ga - ewere na ọ nwụrụ. Google na-eche ọtụtụ ihe banyere ogo nke njikọ ndị inbound na-achọpụta atụmatụ niile na-ejikọta ya. Njikọ ndị na-ekwekọghị n'okike nwere ike ịbụ ọrụ ụbọchị ọ bụla maka ụlọ ọrụ weebụ ọ bụla, bụ ndị nwere ibu ọrụ maka ọgbọ okporo ụzọ azụmahịa. N'oge a, ọnụ ọgụgụ nke njikọ gị abụghị ihe ọ bụla. Mgbe mmezigharị Google ikpeazụ n'ime afọ 2012, ihe ọbụla na-emeghị azụlinks dị mkpa ka a debe gị.
Ọ bụ ya mere na n'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka naanị ụlọ njikọ njikọta nke dị na 2017. Nchịkọta ọdịnaya na-eme ka nsonaazụ njedebe na njedebe nke ụlọ. Mgbalị niile ị ga-eme ga-akwụ ụgwọ dị elu karịa na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị usoro okporo ụzọ na-aga n'ihu, ịkwesịrị ịmepụta ụdị dị iche iche dị iche iche na nke onwe ha.
Iji bulie ikike ngalaba gị, ịkwesịrị ịmepụta njikọ na ebe nrụọrụ weebụ PR ndị dị oke mma nke Google. Dị ka a na-achị, o yiri mgbagwoju anya ịmepụta njikọ na ibe weebụ dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere obere azụmahịa ma ọ bụ nke ọhụrụ. Otú ọ dị, ọ ka nwere ike, m ga-agwa ihe kpatara ya. Naanị jikọọ njikọ njikọ ụlọ dị n'okpuru, ị ga-amalite ịhụ mmụba na okporo ụzọ.
Olee otu esi edozi saịtị gị maka backlinks?
Bụrụ onye na-arụsi ọrụ ike na Quora
Quora bụ ebe nrụọrụ weebụ zuru okè mmụta nke e mere iji nyere ndị ọrụ aka idozi nsogbu ha. Ọ bụ nnwere onwe na imeghe maka ikpo okwu sara mbara nke na-enye abamuru maka ma ndị ọrụ ma webmasters. Ihe niile ị ga - eme bụ ịchọta isiokwu ndị metụtara na niche ahịa gị. N'ihi ya, ị ga-achọta ọtụtụ narị puku mmadụ anaghị aza ajụjụ. Mgbe ahụ laghachi na nsogbu ahụ ị na-eche ọkachamara, ọ bụrụ na enwere kọntaktị kpọmkwem na saịtị gị nke nwere ike inye aka inyekwu ozi gbasara isiokwu, tinye njikọ ya.
Na-enyere aka na HARO
Ebe nchekwa weebụ dị elu PR dị ebe ị nwere ike ịmepụta njikọ azụ na azụ dị mma bụ HARO (nyere onye nta akụkọ aka). Ọ bụ ikpo okwu ebe onye nta akụkọ ga-aga mgbe ha chọrọ enyemaka. Ha na-ebipụta ajụjụ ha, ma ọ bụrụ na i nwere ike inye ha azịza dị mkpa ma na-enye aka, ị na-enweta ohere iji nweta ụfọdụ ndị nweere onwe ha. Atụmatụ nke ịchọta ajụjụ kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ dịka na Quora. Ịkwesịrị ịme ọchụchọ site na ọchụchọ gị ezubere iche ma zaa ajụjụ ndị ahụ ebe ị na-eche na ị maara. Ọ bụrụ na onye nta akụkọ hụrụ àgwà gị, ọ ga-ebipụta ya na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ magazin dị ka Forbes, Search Engine Journal ma ọ bụ Onye Mmekọrịta. N'ihi ya, ị ga-enweta ihe ọṅụṅụ na-ejikọta aha ọma ma mee ka okporo ụzọ gbanwee. O doro anya na ị gaghị enweta njikọ nke ntanetị site na ntanetị akụkọ a, mana, ọ ga-eme ka njirimara njikọ gị dịkwuo mma Source .